My nwunye gara ma ọ bụ na Estonia | Apg29
My nwunye gara ma ọ bụ na Estonia
Nke a bụ otu n'ime ndị kasị ọchịchọ ịmata Chineke na-edu, dị ka m mgbe site.
Taa bụ 25th ncheta nke ụgbọ mmiri Estonia gara n'okpuru Baltic Oké Osimiri. N'iburu nke a n'uche, na m chọrọ ịkọrọ gị m na-agba akaebe nke Estonia ọdachi si a magburu onwe isi nke m hụrụ n'anya akwụkwọ Ndị fọdụrụ n'ezinụlọ n'abalị.
Taa ọ bụ isua 25 ebe ọ bụ na Estonia osụhọde, na 852 ndị mmadụ tụfuru ndụ ha. Naanị 137 ndị mmadụ ọbọhọ.
The njem ụgbọ mmiri M / S Estonia gara n'okpuru Baltic Sea September 28, 1994 n'oge njem ya site Tallinn na Stockholm.
E nwere 989 ndị mmadụ na osisi, nke onye 852 nwụrụ. N'ime ndị a, ndị 501 Swedes. 51 Swedish ọbọhọ. Dị ka ihe niile lanarịrị 137 ndị mmadụ.
Estonia ọdachi bụ kasị ụgbọ na peacetime mgbe ke Nordic mmiri. Ọ bụkwa otu n'ime kasị dị ka esiri mere n'oge mbubreyo 1900s.
The njem Estonia
Site n'akwụkwọ n'ezinụlọ n'abalị nke Christer Åberg.
Ọ bụ ihe na-aghaghị ime, ma ọ bụ kama, otu ihe ndị na-eme oké mkpa nzukọ Tranas ike-ebe. Na nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị ọchịchọ ịmata Chineke na-edu, dị ka m mgbe site.
Mgbe m malitere zọpụta, m wee mgbe e mesịrị na abụọ Bible ụlọ akwụkwọ. The abụọ Bible akwụkwọ ahụ bụ na Jönköping Pentikọstal Church. The aha dị mkpụmkpụ, Pentikọstal Bible College na Pastor Leif Svensson bụ na ụlọ akwụkwọ isi nkuzi. The akwụkwọ bụ n'ezie Viebäcks mahadum ma were a afọ. Ọ bụ n'ezie dị mkpa n'ihi na m.
Ebe ọ bụ na m nwere oké obi ike Leif Svensson, m nọgidere na-eleta ya mgbe ụlọ akwụkwọ biri m. M na-eji mgbe na-akpọ ya ugbu a na mgbe ahụ. Otu mgbe gwara Leif na ya anọwo na mbụ Soviet Union na-ekwusakwa ozi banyere Jizọs. Ọtụtụ ndị natara Jizọs na a zọpụtara ná nzukọ, na ọ gaara nnọọ mma.
Ikiri ụkwụ nke obi m. M chọrọ ịbụ na, mkpu ya n'uche m. Ma, m na ọ dịghị ihe ga-enwe oge iji gaa Soviet Union. Mgbe oge ụfọdụ gasịrị mkparịta ụka anyị etisasịwo na gigantic alaeze ukwu.
Mgbe m mesịrị na-akpọ Leif, ọ gwara m na ha ga-enwe a nnukwu Christian mkpọsa na mbụ Communist n'obí ke Latvia isi obodo, Riga. Ọ jụrụ m ma m chọrọ iso, na m chọrọ, n'ezie. Ọ bụ ọzọ amagbu: Ọtụtụ ndị na-azọpụta ma supernaturally gwọọ ọrịa dị iche iche sJags.
Ọ ga-emecha ghọọ a abụọ njem Riga. Nke a oge nzukọ a nnukwu sports ulo. Ma mkpọsa ekpe a mmetụta miri emi na uche m na m chọrọ itinye aka na ihe ndị dị otú ahụ na-eju ihe na-eme n'ọdịnihu.
Pentikọstal Church na Ljungby gbazitere ọtụtụ ụlọ na m ugbu a nwere a oge biri na ya na-agha ụgha na-ahụ n'elu. Ọ bụ nnukwu onye, ​​dị n'uko a sloping n'uko na skylights. O nwere a nnukwu ụlọ na a ukwuu elongated kichin na ihe alcove nke n'ezie ọzọ dị ka a obere ụlọ. M ụtọ na m na otú ọma na ulo, nke nwere ọbụna a obere mbara ihu. Mgbe m biliri na mbara ihu, m nwere a mma echiche nke ebe, nke ahụ dị nso.
Na nnukwu oblong kichin, ebe m nwere m red corded ekwentị, m na-akpọ otu ụbọchị elu Leif Svensson. (Nke a dị n'ihu cordless igwe na mobile phones 'oge.) Mgbe gwara Leif Svensson m:
"Anyị na-enwe oké mkpọsa na isi obodo nke Estonia. Anyị ga-aga ebe ahụ na a nnukwu njem ụgbọ mmiri si Stockholm. "
Ikiri ụkwụ ọzọ m n'obi. M ga-achọ ka o soro ha. M maara otú ịtụnanya ọ ga-abụ n'ihi na m na-ama na aga na abụọ mkpọsa. Ma m nwere nnukwu nsogbu. Ọ spelt ego bụ.
"M ga-achọ ka o soro ha," M wee sị Leif, a nta n'ụzọ dị mwute na resignedly. "Ma m nwere ike imeli njem. Nanị ihe m na-enweghị ego. "
Ebe ọ bụ na m bụ n'oge a bụ na-enweghị ọrụ, m bi na n'akụkụ peeji. M nwere ike mgbe idaba m ihe amara. M natara ego site na-enweghị ọrụ mkpuchi, na ọ bụ iji na na kacha nta dị mkpa. Kwa izu isii m bụ Otú ọ dị, n'ihi ihe ụfọdụ, a obere ego. Ọ bụ n'ihi a countervailing akpata, nke m na mgbe n'ezie nwere ike aghọtazu. Mgbe Leif gwara m na m nwere ike imeli, kwuru na ya ka na-kweere ike
"Ọ dịghị nsogbu. Anyị ga-eme ndokwa na. Ị na-njem ihe dị ọnụ ala karịa, na ndị nke ọzọ na-amaghị ya. "
Ọ bụ n'ihi na ndị a njem na "ndị nkịtị" pụrụ iso. Ha na-akwụ ụgwọ tiketi onwe ha, ha wee na-enwe ike iji nyere aka n'ụzọ dị iche iche na-aga ọmụmụ. Ha so ná ndị ọzọ na-na-ekpe ekpere maka ndị mmadụ, mgbe mgbe, na otu narị otu narị, bụ ndị bịara chọrọ ka a zọpụta. Mgbe ndị a nkịtị Swedes kpekwara ekpere maka ndị na-na-arịa ọrịa, ọ gwọkwara ha. Nke a bụ nnọọ okwukwe-ụlọ: One wee na ndị ọzọ okwu, na-na-eme eme mgbe Jizọs ebube na ọrụ ebube: Ọzọkwa, m maara ugbu a na Leif si Bible na klas ga-eso na-ekere òkè na mkpọsa. N'ụzọ dị otú a, ha nwetara ohere pụrụ iche iji na-eme ihe ha mụtara na Bible akwụkwọ. Ha ga na n'anya ha onwe ha na-ahụ na ọ na-arụ ọrụ ka ha kwere na Jizọs.
Leif Svensson mere mgbalị n'ezie ime ezi mgbasa ozi maka njem a, nke mere na m nwere ike na-eso. Ọ gwara m otú ihe ọma mgbasa ozi ga-abụ na otú ịtụnanya ọ ga-gaa ọkaibe njem ugbo si Stockholm na Tallinn. Anyị ga na-anọ na ha onwe ha cabins na ụgbọ mmiri na m agụụ ike ugbu a ọzọ na ndị ọzọ n'ebe ahụ. Tupu anyị biri na-akparịta ụka Leif kwere nkwa na ya ga-eziga ozi gbasara mgbasa ozi na na-a mara mma broshuọ banyere dara oké ọnụ ma ukwu njem site mail. A ụbọchị ole na ole mgbe mkparịta ụka m nụrụ n'ọnụ m nnukwu ndụ ụlọ otú ọ iwe tọgbọ n'ime mail oghere na m ụzọ, na thud nke ihe rutere na ulo n'ala. M na-agbapụ nke m? Ket ruo mgbe The ụzọ dị ọcha na-ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụ post na eruola. Ee, o nwere bụ na egwu egwu. M chọrọ ịhụ ma ọ bụrụ na akwụkwọ ozi na ihe ọmụma banyere Estonia njem bịa. All ọzọ mail akwụkwọ ozi, magazin na mgbasa ozi bụ oge a ọ bụghị nnọọ na-akpali. Iji-atọ m ụtọ, m chọpụtara na a nnukwu aja aja envelopu na Leif Svensson dị ka ziri ozi.
M ozugbo wee dọwaa aja aja envelopu na m index mkpịsị aka ka mgbe ụfọdụ akwụkwọ ozi mma, wetara ọdịnaya na hụrụ ya a bit amateurish mere ọmụma banyere Estonia njem na Leif zitere m. My anya mmasị kwa anya ka ndị mara mma, na-anabata broshuọ banyere nnukwu okomoko njem ugbo ndị ga na-anyị ka anyị Estonia.
M na-amụ oké ụgbọ mmiri na a dreamy anya. The kaadị e diagonally site n'elu. The ụgbọ ahụ n'ebe nile ebe ọ nọ na-aga na-acha anụnụ anụnụ oké osimiri na ogologo ọcha zaa n'azụ. Gịnị ma ọ bụrụ na m nwere ike na-aga na. Gịnị ihe njem ọ ga-abụ, ọtụtụ ụzọ.
Ee, m chọrọ n'ezie na-eso, ma mgbu m n'obi mgbe m dị nnọọ echetaara m onwe m nke ọnọdụ akụ na ụba na m chọpụtara na m na. Gịnị ka m kwesịrị ime? Ọfọn, ma eleghị anya ihe m mgbe niile na-eme mgbe m efehe ná nsogbu ma ọ bụ mkpa ọ bụla: Kpee ekpere ka Chineke. M kpudo n'ihi m ikpere site bed ke obere ụlọ, nke bụ m alcove, na kpegaara Chineke ekpere n'aha Jizọs. M jụrụ ya ka o nye m ego dị mkpa maka njem ahụ. Na mgbe ị na-ekpe ekpere ka Chineke na-aza ekpere - n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ.
M chere na okenye Christian di na nwunye bụ ndị sokwa enyi m. Aha ha bụ Rut na Berndt ma a maara nke ọma ngwaike ụlọ ahịa na etiti Ljungby. Ugbu a na mgbe, m na-eleta ha. M n'Ingland na ha. Mgbe mgbe m jụrụ-abịa mgbe m na-akpọ na ụzọ ha. Ma ọ mere ezi mgbe.
Ha bi nso na mmiri ụlọ elu, nke bụ na a ugwu dị n'elu center. Ọ na-ada banyere nkeji iri abụọ na-eje ije ruo ha aja aja brick ụlọ. Mgbe m letara ndị a enyi kpọrọ m mgbe niile kọfị na kuki mgbe anyị nọdụrụ na aja aja sofa na nnukwu mara mma ndụ ụlọ.
Anyị ga na-ekiri Christian videos ọnụ. N'oge a, o were ka a VCR mgbe ị ga-ahụ tupu e dere movies na telivishọn. Ruth na Berndt n'ezie buru na Christian fim si dị iche iche mkpọsa na nzukọ gburugburu ụwa. The fim ndị akpali nnọọ mmasị na ha nwere ma ama okwu. Ọ na-ahụ nwetara ma n'ụzọ ime mmụọ na n'anụ ahụ ndụ mgbe ị nwere. Anyị na-ekwu n'ezie banyere Jizọs, na banyere ọnọdụ ime mmụọ na Sweden.
Ruth na Berndt mgbe niile nwere otutu agwa na kpụ ọkụ n'ọnụ ụzọ. M na-emekwa a ọtụtụ nke obi, n'ihi ya, ọ na-abụkarị mbubreyo mgbe anyị zutere. Anyị nwere ihe nile atọ agbasaghị ida track nke oge. N'ihi ya, ọ bụghị ihe ijuanya na ọ na-aghọwo abalị tupu m na-eje ije n'ụlọ. M mgbe nke a kwadebere maka ogologo, ehihie na abalị mgbe m gara leta ha.
Otu mgbede, ọ bụ oge ọzọ gara Ruth na Berndt. M na-eje ije nke m ulo na Pentikọstal ụka, gafere ụgbọ okporo ígwè, na-eje ije gafee square na mgbe trudged elu ogologo ugwu. On n'elu ugwu m tụgharịrị agba nkịtị si na mmiri ụlọ elu n'elu n'akụkụ n'okporo ámá ndị mere ka ha n'ulo, we rigo obere nkume nzọụkwụ na kụrụ mgbịrịgba.
Dị nnọọ meghee ụzọ kelee m dị na mbụ welcome set. Dị ka mgbe niile, m chere na a obi ụtọ na-natara site enyi m. Ọ chere otú ahụ ihe ọma na-na ha. Ebe ọ bụ na m ka na naanị n'oge a, ọ bụ ihe m mkpa nwere ezi Christian enyi nọkọọ na.
Anyị wee nọdụ, dị ka na mbụ, ala na ndụ ụlọ TV sofa, malitere akparị ụka, na-ele fim, na-ekwu, na-aṅụ kọfị, na-ele fim, na-ekwu ... Na nkenke, ihe anyị na-eji na-eme mgbe anyị zutere, na awa ama dị na mbụ pụọ.
Oge ụfọdụ n'ime ogologo oge mgbede, m malite ikwu okwu banyere njem ahụ, dị ka m mere nke ukwuu chọrọ ịga on.
"My mbụ Bible nkụzi na Bible School Pentecost na Jönköping, Leif Svensson, ga-eme ka a ọhụrụ mgbasa ozi na Eastern Europe", m gwara Rut na Berndt.
"N'ihi na Latvia ọzọ?" Jụrụ Berndt mgbe ọ nāṅu a obere inu kọfị na-ata ata elu a achicha.
Ọ bụ ozugbo mmasị n'ihi na o nwere a oké mmasị na evangelization ná mba ndị ọzọ, karịsịa na Eastern Europe. The video flickered na ha egosi na telivishọn, ma ugbu a ọ bụ na mberede onye ọ bụla nke anyị nwere mmasị na ya. Ndị na-abịa njem ndị na-elekwasị anya, ọ ọbụna jidere m enyi 'ntị. Ha ma na m mere ndị a iche iche njem n'oge gara aga na ha maara otú ihe ndị njem ama ọkọwọrọ m.
"Ọ dịghị, Tallinn na Estonia," ka m zaghachiri na Smitty ajụjụ. "Ọ ga-abụ oké revival siiri anion nke ahụ, n'otu ụzọ ahụ dị ka mkpọsa m na na na Riga."
"Gịnị fun" tabbed Ruth na mgbe ọ wụsara ụfọdụ ọzọ kọfị na m efu iko. "Ị ga-abịa?" Ọ jụrụ, na-ejide n'otu oge ruo mgbe achicha efere m na m ga-ọbụna a achicha maka ọhụrụ wụsara kọfị.
"M ga-n'ezie na-amasị ya," m wee si, "ma e nwere otu obere snag. Nanị ihe m na-enweghị ego maka njem a, otú m nwere ike imeli na-aga. "
Echere m na m mere n'ezie n'ihi na mgbe m kwuru ya ikpeazụ. Di na nwunye a nwere ya bụ ọtụtụ ego. Ha were na-ewu ewu na-eji ọrụ n'aka ụlọ ahịa dị na Ljungby. Ma, anyị na-eji na-ekwu okwu n'ihu ọha, banyere ihe niile, otú ahụ mere, ọ bụ n'ezie na-arịọ m.
Anyị wee na-ekwu okwu banyere ihe niile, ma mgbe mgbịrịgba ghọrọ ọkara gara aga iri na abụọ, m chere na agbanyeghị na ọ bụ oge na-akwụsị anyị Community. Mkparịta ụka ahụ gara n'ihu ruo a mgbe na n'ihu ọnụ ụzọ tupu anyị mesịrị lawara.
M na-eje ije ala ogologo ugwu, dị ka na mbụ nwere oké echiche nke center ke ekịm. Streetlamps, ụlọ na ụlọ ahịa mara mma mụnyere na ọchịchịrị na ụzọ azụ m ulo n'etiti obodo sinima na ụgbọ okporo ígwè.
Mgbe anyị lawara n'abalị chere Berndt na ihe m gwara banyere Estonia njem. Ọ bụrụ na m chọrọ ịga na njem, ma emeghị m nwere ohere n'ihi enweghị ego.
"Ọ bụrụ na Chris-ekele anyị ọzọ tupu njem a, m ga-enye ya ego, 'tụgharịa uche Berndt onwe ya.
Ndị a echiche m maara n'ezie ihe ọ bụla banyere. Berndt gwara m ihe mgbe e mesịrị na ọ na-aga inye m ndị dị mkpa ego, ma ọ bụrụ na m na-abịa azụ tupu njem. The iju ihe bụ na adịghị m.
Nke a bụ akụkụ dị nta nke ike karịrị nke mmadụ na doro anya Chineke nduzi. M rịọrọ ego maka njem a, ma m na-jụrụ, na nwunye. Chineke na-arụ ọrụ ugbu a na m ga-anya-enwe ohere inweta azịza ekpere.
Site na nke a oge m na a gwara ya na-enweghị ọrụ. Kwa izu isii, m na-na-ego si na-enweghị ọrụ mkpuchi, na ugbu a ọ bụ oge ọzọ. Nke a na m kpam kpam echefu echefu, ma mgbe m na na m index mkpịsị aka nchawa emeghe envelopu si na-enweghị ọrụ mkpuchi, m hụrụ na ha na-etinye na ego a. Na mberede, m nwere onwe m imeli njem Estonia.
Ma ọ dị ihe merenụ m n'obi. Interest na-ejegharị ejegharị na Estonia abụghịzi e. Ọ n'ụzọ ụfọdụ okụrede mgbe m chere. Ọ dị nnọọ nkịtị na obi m maka zubere mkpọsa na Tallinn. M nwere nnọọ ihe ọ bụla ọchịchọ ọzọ gaa Estonia.
M gwara enyi m Tomas, onye were m na Pentikọstal ụka na meriwo m Jesus, m ugbu a nwere ego na akaụntụ. Ọ maara otú m chọrọ ịga njem Estonia, ma na aku na uba na-etinye a kwuo okwu na wheel.
"Ma mgbe ahụ, ọ bụ uche Chineke ka ị ga-aga!" O tiri mkpu, sị spontaneously mgbe m gwara ya na ozi ọma nke ego. Aga m echefu m azịza mgbe m ta grimly, ma na-akwa nkwenye zara, sị:
"Ọ dịghị, ọ bụghị."
M mere n'ezie maara na ihe m kwuru. Ọ bịara dị nnọọ n'ụzọ ụfọdụ n'ọnụ m na egbugbere ọnụ m. Lee, m na e-alụ ma rịọ ka e kwere ka na-aga Estonia. Mgbe m mesịrị na ohere, m kwuru na ọ bụ uche Chineke.
Ugbu a gasiri m na-aghọta na ọ na n'ezie bụ m bụ onye kwuru ya. Ọ bụ Mmụọ onye kwuru site n'aka m. Ghara ka "ime mmụọ" ma ọ bụ cocky, m toned ala, Otú ọ dị, ọ ubé site na-agbakwụnye:
"M na-eche ya."
M chere na ọ dara a bit mma karịa ịbụ ya mere cocksure. Ma mgbe ndị na nkwupụta na okwu a tụlere ọgwụgwụ. Thomas mgbe were elu karịa ihe - na m na-eme adịghị ma. Ihe merenụ na m n'uche banyere mkpọsa na Tallinn. My ọchịchọ kpamkpam blown pụọ na m nwere ike n'ezie na-aghọta ya.
M njem enweghị ebe na oge, na m ruo mgbe ebighị ebi ekele. N'ikpeazụ, m na-aghọta na ọ bụ Chineke na otú duru m na a ji ụzọ ọrụ ebube.
Otu nwa agbọghọ ke Linköping, naanị ọnwa ole na ole tọọ m, na-eche banyere na-aga na otu njem. Nke a nwaanyị ahụ, n'adịghị m, toro n'ezinụlọ Ndị Kraịst. Ọ si otú azọpụta ma ama jisiri na-arụ ọrụ dị ka onye okwuchukwu na a parish. A afọ ole na ole tupu mgbe ọ zutere Jesus maka ọhụrụ na ugbu a biri kenyere Chineke ndụ.
Ụfọdụ n'ime ndị enyi ya nwere ruo ogologo oge na-agbalị iji manye ya sonyere anyị na nke a dị ịtụnanya na njem dị egwu dị ka ọ ga-apụta na-abịa ka Estonia. Ma ọ maghị n'ezie otú ọ ga-eme. Ọ ga-eso ma ọ bụ? Ọ bụ n'ezie na uche abụọ n'ụlọ ha na-ụlọ na ulo na Linköping.
On na tebụl ya mma kichin bụ kpọmkwem otu Ibé akwụkwọ na njem n'ụlọ m. O nwere n'ezie a oyiri nke mma broshuọ banyere dara oké ọnụ njem liner, nke gosiri ebube ship na-acha anụnụ anụnụ oké osimiri na-acha ọcha Ruth n'azụ.
N'ebe ahụ, na ya ulo, o nwere mgba ma onwe ya na Chineke. Olee otú ọ pụrụ ime?
A obere oge gafere, m ama ala na center na mere a ikpe. On ụzọ n'ụlọ na mgbede, m na-echeta ya nke ọma, m ije gara aga a ọdụ akwụkwọ akụkọ. Karịsịa otu n'ime akụkọ na ịrapara n'ahụ si ndị ọzọ, m na-eche na ọ bụ n'etiti atọ. M anya ya gazuru nta dọpụ uche ya mgbe m gafere miri. The akụkọ, ọ bụ na nnukwu nwa akwụkwọ ozi: "ugbo miri dị na Baltic n'abalị - ihe karịrị 800 nwụrụ anwụ"
N'agbanyeghị egwu na-awụ akpata oyi löpsedeln, otú ahụ ka m kwuru ya sonso. Eleghị anya n'ihi na m chere na ọ bụghị mgbe niile metụrụ m, na mgbe ọ na-eme ebe ọzọ na abụghị "ebe a". Ke adianade do, m chere na-ezighị ezi echiche, na ọ ga-emetụta anyị na Sweden, ma ndị ọzọ na mba. Olee mgbe ndị mmadụ na m bụ na ọ bụghị a bit dị iche iche na oge. Mgbe mberede na ọdachi eme, ọ bụ mgbe onye ọzọ nọ n'ụwa. Ọ na-adịghị eme na Sweden na ọbụna na-erughị na-echegbu m bụ ya. Iju echiche, ma ọ nwere ike dị mwute ikwu na-adị.
N'ụtụtụ echi ya, m nọdụrụ nwayọọ wee rie nri ụtụtụ usekwu m m na-etinye m cereal na a Sanwichi na salami mgbe m absentmindedly gere ntị ozi ọma ngbasa ozi na redio.
Newscaster-ekwu banyere oké ọdachi na Baltic Oké Osimiri. Na mberede, m nọ na-echetara löpsedeln m hụrụ n'abalị tupu. A ugbo mikpuru, na ihe karịrị mmadụ 800 nwụrụ. M wee malite ige ntị ọzọ nke ọma. Onye nta akụkọ kwuru na ugbo ama ya ụzọ si Estonia ka Sweden na n'etiti abalị gara n'okpuru mmiri na ebili mmiri nke oké osimiri.
Estonia? Ma ọ ka Estonia, m ga-arahụ na na njem? Na ọ bụ n'ebe ahụ na Leif Svensson na-aga na-enwe ya mkpọsa. O mekwara ndokwa ka a nnukwu ụlọ ọrụ na-ga-abụ. Ọzọkwa, ihe fọrọ nke nta niile Bible akwụkwọ na klas na-na.
My echiche ya gbanwee ọzọ mgbe Newscaster ugboro ugboro aha nke ugbo na mikpuru n'oké osimiri n'ala, "ugbo aha bụ Estonia".
Na mberede, m kpam kpam anya ma chere na nyeghị ya ọnụ okwu: Estonia? Ọ bụghị na na nnukwu ụgbọ mmiri a na-akpọ ndị ga na-anyị ka anyị Estonia?
M kwụsịrị ịta m flakes na-etinye ala ngaji. Sanwichi na dotted soseji hapụ m, na m na-kpudo na-atụ kama na-achọ na akwụkwọ akụkọ ikpo. N'etiti akwụkwọ akụkọ na reklarnblad m anya maka broshuọ na ngwa ngwa ga-esi mara aha nke ụgbọ mmiri.
Ọ bụ ogologo oge tupu m hụrụ ya. Na-enweghị atụ egwu m anya na foto na ibu ụgbọ mmiri na-aga ji nganga na oké osimiri na-asụ ụfụfụ ebili mmiri n'azụ. My anya chọọ ịnụ ọkụ n'obi na maka ụgbọ mmiri aha, bụ nke e dere na anya ojii akwụkwọ ozi na nnukwu ugbo. The ụgbọ mmiri ahụ na foto mmanya n'ezie aha ya bụ Estonia.
M legidere broshuọ mara mma foto. News The olu m nụrụ ọbụna aba. Nanị ihe na-now adị dị m n'obi bụ aha nke ụgbọ mmiri: Estonia. M na-agụ ya ugboro ugboro. The obere Baltic mba nganga M / S Estonia mikpuru na ala. My enyi Leif Svensson na ndị niile ya ụlọ ọrụ ahụ eleghị anya kemgbe na osisi. Na m ga-e abuana.
Mgbe ọ bịara doo m na n'ezie bụ Estonia dara, toted elu ajụjụ gị isi. M nọdụrụ maka a ogologo oge na kichin na tebụl na legidere obere amateurish mgbasa ozi broshuọ banyere mkpọsa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ọkachamara broshuọ Estonia, ugbu a doro anya na-agha ụgha na Baltic n'ala oké osimiri. Almost emeghieme ubé bịara ikiri, m hụrụ abụọ broshuọ mgbe m nwara-etinye ọnụ na foto nke ihe merenụ. My echiche gara Leif Svensson. Mberede, ọ kụrụ m na m ga na-akpọ ya na nwunye ya, Sara. Ọ ga-aga na njem a, dị ka ọ na mgbe ụfọdụ. O nwere, ihe ndị ọzọ, ndị Riga na otu njem m n'oge ọzọ. Ma, n'oge a, ọ họọrọ ịnọ n'ụlọ. M weliri red corded ekwentị na kpọrọ 036 nọmba Jonkoping.
Nanị ole na ole n'ókè ike ime tupu ọ zara. Eleghị anya Sara nọdụ na-ele ekwentị na ụbọchị, n'ihi na ọ bụ eleghị anya, ọtụtụ ndị na-akpọ na chọrọ ịnụ ihe merenụ. Leif nwere ọtụtụ ndị enyi na maara n'ezie nakwa a ọtụtụ ndị na site na ha ọrụ. N'ezie e nwekwara ọtụtụ ezinụlọ nke ụmụ akwụkwọ ndị chọrọ na-achọ ihe ọmụma banyere ha hụrụ n'anya. Sara gosikwara na Estonia bụ ụgbọ mmiri Leif na dum party bụ on. O wee sị a ikpe nke m na-agaghị echezọ:
"Ma, anaghị m nwere ọtụtụ olileanya ..."
O nwere mere enweghị olileanya na Leif ama eme. Na ya enweghị. Ọ na ndị ọzọ na pastọ, Lennart Carlsson, tinyere ọtụtụ ihe ndị Bible na klas, na ike nke ọzọ, na ọtụtụ narị ndị ọzọ nọ na-egbu n'abalị ahụ ogbu nke oké osimiri mgbe Estonia miri dị na iri na ise nkeji.
M chere banyere ihe omume a ihe karịrị otu ugboro. M gaara on board Estonia. Kama na-esonụ tinyere na njem Estonia, m họọrọ ịnọ n'ụlọ, n'ihi na m na-adịghị "na-eche" maka ya.
The nwaanyị si Linköping, site ụzọ, aha ya bụ Marie, kpebiri na n'ihi ihe ụfọdụ iji gaa Israel kama Estonia - ọ bụ ezie na ọ na mbụ kpebiri isonyere Leif Svensson si mkpọsa njem.
Mgbe m mesịrị chọpụta na m ghọtara ihe ndị ọzọ otú incredibly Chineke duru ya na m.
Site n'akwụkwọ n'ezinụlọ n'abalị nke Christer Åberg bipụtara Semnos nkwusa . Isi nke 2: Journey na Estonia. Pages 25-36.